अण्डाहरू ताजा छ कि भनेर जान्ने तरिकाहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - HOME-N-বাগান
अण्डाहरू ताजा छ कि भनेर जान्ने तरिकाहरू
घर होम एन बगैचा सुधार Oi- कर्मचारी द्वारा सुधार पद्मप्रीथम महालिंगम | अपडेट गरिएको: बिहीबार, मे १ May, २०१ 2015, १,: १ [[IST]
तपाईंले खाजाको लागि अण्डा करी बनाउने निर्णय गर्नु भएको छ तर अण्डाको प्याकेजलाई हेरेर यो खराब भएको छ कि भनेर बताउँदैन। खराब अण्डाको साथ तपाईंको करी खराब गर्नु भन्दा खराब केहि छैन।
सामान्यतया अण्डाहरू एक पटकमा फ्रिजमा हप्तासम्म रहन्छ र यसको ताजापन निर्धारण गर्न अलि गाह्रो हुन सक्छ। तपाईको रेफ्रिजरेटरको खाना कहिले बासिन्छ र यो हामी सजिलै दुर्गन्धबाट पहिचान गर्दछौं वा तपाइँ मोल्डको लागि जाँच्न सक्नुहुन्छ भनेर निर्धारण गर्न सजिलो छ।
अण्डाहरू खाने 10 कारणहरू
तपाईका आँखाहरू र नाक भरपर्दो उपकरणहरू हुन् जसले सजिलै मासु वा जडिबुटीहरूको ताजापन निर्धारित गर्न सक्छ तर तपाईले इन्द्रियलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न जब यो अण्डोको जाँच गर्नको लागि आउँदछ तपाई यसलाई क्र्याक गर्नु अघि।
त्यसोभए के थाहा पाउने तरिकाहरू के छन् यदि तपाईंको अण्डा ताजा छ? त्यहाँ अन्डा परीक्षण गर्ने केहि तरीका छन् जहाँ यो उपभोग गर्नु राम्रो छ वा छैन भनेर हेर्न।
उमालेको अण्डा निकाल्ने १० सजिलो तरीका
१ हप्तामा पेटको बोसो गुमाउन व्यायाम गर्नुहोस्
कसरी अण्डाहरू ताजा छन् भने कसरी? ताजा अण्डाहरूमा बादल सेता रंग हुनेछ। र जब अण्डो उमेर सेता को लागी स्पष्ट रंग बन्न सुरु हुन्छ (जसको मतलब अण्डा अझै ताजा छ)।
अर्कोतर्फ सेतोको सट्टामा यदि अण्डामा गुलाबी वा इरिडसेन्ट रंग र क्र्याक पछि हल्का सडेको गन्ध छ भने तपाईंको अण्डा खराब भएको छ। यदि तपाईंले अण्डा तोड्नुभयो र तपाईंलाई केही सडेको गन्ध आउन थाल्यो भने निश्चित गर्नुहोस् कि त्यसलाई फ्याँक्नुहोस् र पकाउन पक्का गर्नुहोस्।
एक दिन कति सूर्य नमस्कार
तपाईंको अण्डा ताजा छ भनेर जान्नको लागि अर्को चाखलाग्दो तरिकाहरू मध्ये एक फ्लोटिंग टेस्टको प्रयास गर्दैछ। निश्चित गर्नुहोस् कि अण्डालाई चिसो पानीमा राख्नुहोस्। अण्डा भन्दा पानीको स्तर २ गुणा बढी हुनु आवश्यक छ।
प्राय: ताजा अण्डा कचौराको तल्लोमा डुब्ने थियो र सबै सम्भाव्यतामा पक्षमा फ्लट हुनेछ। ताजा अण्डा डुब्नेछ, जबकि पुरानो अण्डा फ्लोट हुनेछ। अण्डा कि डूब शिकार र soufflés को लागी उपयुक्त छ।
यसबाहेक पुरानो अण्डा तलमा रहनेछ र थोरै बब्बल गर्ने प्रयास गर्दछ। सतहमा होभर हुने अण्डाहरू खराब हुन्छन् र कहिले उपभोग गर्नु हुँदैन। तिनीहरू खानको लागि कहिल्यै नयाँ हुँदैनन्।
यदि अण्डा कचौराको तल अन्त्यमा खडा हुन्छ भने यसको मतलब यो केही हप्ता पुरानो हो तर खानको लागि अझै राम्रो छ।
अनअक्र्याक गरिएको अण्डा जाँच गर्नको लागि अण्डालाई कानमा समात्नुहोस् र ताजापनको लागि जाँच गर्नको लागि यसलाई अलि हल्का हल्लाउनुहोस्। यदि तपाईंले अण्डाभित्रबाट छुट्टै ध्वनि सुनिरहेको सुन्नुभयो भने सम्भवतः अण्डा खराब भएको हुन सक्छ।
जे होस्, यदि तपाईले केही सुन्नुहुन्न भने उपभोग गर्नु ठीक छ। यो जान्नको लागि एउटा रोचक तरीका हो कि अण्डा ताजा छ कि छैन।
अण्डालाई क्र्याक गर्नुहोस्
कसरी कुरा गरेर केटीलाई फकाउन
प्लेटमा अण्डा क्र्याक गर्न कोसिस गर्नुहोस् समतल सतह-- प्लेटमा। यदि पहेंलो थोरै ग्लोब आकारको छ र यसलाई नजिकै बसेको छ भने अण्डा ताजा र उपभोग गर्न सुरक्षित हुन्छ।
अर्कोतर्फ, यदि अण्डाको पहेंलो अलि कम बजारमा बसेको छ र एल्बुमेन (अण्डाको सेतो) एकदम स्पष्ट छ तथापि यो निकट रहेको छ भने तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि अण्डा अलि बढी पुगेको छ। अझै यो खाना राम्रो र सुरक्षित छ।
यदि जर्दी सपाट छ र सेतो (अल्बुमेन) लगभग पानी (बग्ने पानी) जस्तै छ भने यसको स्पष्ट अर्थ तपाईं अण्डा सडेको छ। यी कसरी गर्ने भन्ने बारे केही तरिकाहरू छन् यदि तपाईंको अण्डा ताजा छन्।
एक व्यक्ति मांगलिक छ भने कसरी थाहा पाउने
कसरी अनुहारको लागि रातो चन्दन पाउडर प्रयोग गर्ने
कपाल विकास को लागी पातको फाइदाहरु
के हामी चन्द्रग्रहणमा खान सक्छौं?
केटाकेटी बच्चालाई बचाउने मा उत्कृष्ट नारा
शरीर तनाव व्यायाम ऊंचाई वृद्धि गर्न